Any ambony ny lanitra na tsia - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Ny lanitra ve sa tsia?
Fotoana fohy taorian'ny nahafatesanao dia hitanao anaty filaharana manoloana ny vavahadin'ny lanitra, izay i St. Peter dia miandry anao miaraka amina fanontaniana vitsivitsy. Raha hita fa mendrika ianao avy eo, dia avela hiditra ary, miaraka amin'ny akanjo fotsy sy lokanga obbligato, dia hiezaka ianao hitady ilay rahona natolotra anao. Ary avy eo amin'ny fotoana itadiavanao ny tadiny dia azonao atao ny mamantatra ny namanao sasany (na dia tsy betsaka araka ny nantenanao aza); fa angamba koa maro izay tianao hisorohana mandritra ny androm-piainanao. Ka izao no manomboka ny fiainanao mandrakizay.
Tsy dia matotra loatra ianao. Soa ihany fa tsy voatery hino izany koa ianao, satria tsy marina izany. Ahoana anefa no tena fiheveranao ny lanitra? Ny ankamaroantsika izay mino an’Andriamanitra dia mino koa ny karazana fiainana any ankoatra izay ahazoantsika valisoa noho ny fahatokiantsika na fanasaziana noho ny fahotantsika. Tena azo antoka izany - izany indrindra no nahatonga an’i Jesosy ho amintsika; izany no nahafatesany ho antsika ary izany no ahavelomany ho antsika. Mampahatsiahy antsika toy izao ilay atao hoe fitsipika volamena: “... Toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona. 3,16).
Fa inona marina no dikan'izany? Raha tena akaiky ny sary fanta-daza ny karaman'ny olo-marina, dia tokony hijery akaiky ny toerana hafa isika - tsara, mety tsy te hanaiky izany isika.
Mieritreritra momba ny lanitra
Ity lahatsoratra ity dia mikendry ny hamporisika anao hieritreritra momba ny lanitra amin'ny fomba vaovao. Zava-dehibe amintsika ny tsy ho tonga dogmatika; ho adala sy miavonavona izany. Ny Baiboly ihany no loharanom-pahalalana azo itokisana, ary manjavozavo ny amin’ny fomba hanehoan’izy io ny zavatra miandry antsika any an-danitra. Ny Soratra Masina anefa dia mampanantena antsika fa ny fahatokiantsika an’Andriamanitra dia hiasa amin’ny tsara indrindra na eto amin’ity fiainana ity (miaraka amin’ny fakam-panahy rehetra misy azy) na any amin’ny tontolo ho avy. Nasehon’i Jesosy mazava tsara izany. Na izany aza, tsy dia nifampiresaka firy momba ny ho endriky ny tontolo ho avy izy 10,29-30).
Nanoratra toy izao ny apostoly Paoly: “Ankehitriny dia tsy mahita afa-tsy sary tsy mazava toy ny amin’ny fitaratra rahona isika ...” (1. Korintiana 13,12, Baiboly Vaovao Tsara). I Paoly dia iray tamin’ireo olona vitsivitsy nomena karazana “visa ho an’ny mpitsidika” ho any an-danitra, ary sarotra taminy ny nilazalaza ny zava-nitranga taminy (2. Korintiana 12,2-4). Na inona na inona izany, dia nahavariana tokoa ny nanosika azy hanova ny fiainany hatramin'izao. Tsy nampatahotra azy ny fahafatesana. Efa ampy ny nahitany izao tontolo izao ho avy ary niandrandra izany tamim-pifaliana mihitsy aza izy. Tsy mitovy amin’i Paoly anefa ny ankamaroantsika.
Rehefa mieritreritra ny lanitra isika dia tsy afaka sary an-tsaina izany raha mamela antsika ny fahalalantsika ankehitriny. Ohatra, ireo mpanao hosodoko tamin'ny Moyen Âge dia naka sary paradisa an-tany feno, izay noforonin'izy ireo manana ny hatsarana sy ny fahalavorariana mifanaraka amin'ny zeitgeist-ny. (Na dia mila manontany tena aza isika hoe avy aiza eto amin'izao tontolo izao ny fanentanana ho an'ny putti, izay mitovy amin'ny zaza tsy mitanjaka, manana endrika aerodinetika tena tsy azo ovaina.) mandroso anio raha te-hanao sary an'io tontolo ho avy io isika.
Ny mpanoratra maoderina dia mampiasa sary ankehitriny. Ny kilasika mahafinaritra an'i CS Lewis, The Great Divorce, dia mamaritra ny dia an-dalambe fitateram-bahoaka avy any amin'ny helo (izay hitany ho faritra midadasika sy lao) mankany an-danitra. Ny tanjon'ity dia ity dia ny hanomezana ireo izay any amin'ny "helo" fotoana hanovana ny sainy. Ny lanitra 'i Lewis dia mandray any amin'ny sasany, na dia maro aza ny mpanota tsy tia an'io any aorian'ny fanekena voalohany ary aleon'izy ireo ny helo fantatra. Nanantitrantitra i Lewis fa tsy nanao fahitana manokana momba ny votoatin'ny fiainana mandrakizay; ny bokiny dia tokony ho takatra amin'ny alàlan'ny fanoharana fotsiny.
Ny sangan'asa mahavariana nataon'i Mitch Alborn, The Five People You Meet in Heaven, dia tsy milaza ihany koa fa marina ny teolojia. Miaraka aminy, ny lanitra dia ao amin'ny valan-javaboary amoron-dranomasina, izay niasan'ny mpilalao fototra tamin'ny fiainany manontolo. Fa i Alborn, Lewis, ary ny mpanoratra toa azy ireo dia mety nahita ny farany ambany. Azo atao angamba fa tsy hafa noho ny manodidina izay fantatsika eto amin'ity tontolo ity ny lanitra. Rehefa niresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy dia matetika izy no nampiasa fampitahana amin'ny famaritana azy amin'ny fiainana araka ny ahalalantsika azy. Tsy mitovy aminy tanteraka izany, fa mampiseho fitoviana ampy aminy hahafahany manao sary mifanitsy.
Ny ankamaroan'ny tantaran'ny olombelona dia tsy nahalala firy ara-tsiansa momba ny toetran'ny cosmos. Raha nieritreritra zavatra toy izany ianao, dia nino fa ny tany dia kapila izay voahodidin'ny masoandro sy ny volana amin'ny faribolana concentric tanteraka. Ny lanitra dia inoana fa hitranga any amin'ny toerana iray, raha any amin'ny afobe kosa ny afobe. Ny hevitra nentin-drazana eo am-baravaran'ny lanitra, lokanga, akanjo fotsy, elatry ny anjely ary fiderana tsy manam-petra dia mifanaraka amin'ny fanantenana izay ampitaintsika amin'ireo mpandinika Baiboly madio izay nandika ny ampahany kely amin'ny Baiboly milaza ny momba ny lanitra mifanaraka amin'ny fahatakarany an'izao tontolo izao.
Ankehitriny dia manana fahalalana betsaka momba ny astronomika isika ankehitriny. Fantatsika fa faritra kely fotsiny ny tany ao amin'ny elanelana tsy hita isa. Fantatsika fa ny heverintsika ho zava-misy azo tsapain-tanana dia tsy farafaharatsiny afa-tsy ny tamba-jiro angovo mampitambatra izay tarihan'ny hery matanjaka izay tsy mbola niahiahy ny fisian'ny fisiany ny ankamaroan'ny tantaran'ny olombelona. Fantatray fa angamba eo amin'ny 90% eo amin'izao rehetra izao dia misy ny "maizina" - izay ahafahantsika manondro ny matematika, nefa tsy hitantsika na handrefesana izany.
Fantatsika fa na ny fisehoan-javatra tsy azo iadian-kevitra toy ny "fandehan'ny fotoana" dia mifandraika. Na ny refy mamaritra ny fiheverantsika ny habaka (ny halavany, ny sakany, ny haavony ary ny halaliny) dia lafiny takatry ny maso sy ara-tsaina fotsiny amin'ny zava-misy sarotra kokoa. Ny astrofisikista sasany dia milaza amintsika fa mety misy refy fito hafa farafaharatsiny, fa ny fomba fiasan'izy ireo dia tsy takatry ny saina amintsika. Ireo mpahay siansa ireo dia manombatombana fa ireo refy fanampiny ireo dia tena misy toy ny hahavony, ny halavany, ny refy ary ny ora. Eo amin'ny ambaratonga mihoatra ny fetra tsy azo refesina amin'ny fitaovantsika mora tohina indrindra ianao; ary koa avy amin'ny saintsika dia afaka manomboka miatrika azy isika nefa tsy ho tototry ny fanantenana be loatra.
Ny fahombiazan'ny siansa nampidirina tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa dia nanova ny fanjakan'ny fahalalana saika ny faritra rehetra. Ary ahoana ny amin'ny lanitra? Moa ve isika mila mamerina mandinika ny hevitra momba ny fiainana any aoriana any?
Ny any an-tany
Teny mahaliana - ankoatr'izay. Tsy ity lafiny ity, tsy avy amin'ity tontolo ity. Fa tsy azo atao ve ny mandany ny fiainana mandrakizay amin'ny tontolo mahazatra kokoa ary manao izay tena tiantsika hatao foana - amin'ireo olona fantatsika ao amin'ny vatana izay azontsika fantarina? Moa ve tsy ny fiainana any ankoatra no fanitarana ny fotoana tsara indrindra amin'ny fiainantsika malaza eto amin'ity tany ity raha tsy misy ny enta-mavesatra, ny tahotra ary ny fijaliana? Amin'izao fotoana izao dia tokony hamaky tsara ianao - ny Baiboly dia tsy mampanantena fa tsy ho izany. (Aleoko averimberina indray izany - tsy mampanantena ny Baiboly fa tsy hanao izany).
Ilay teolojiana amerikanina, Randy Alcorn, dia niresaka momba ny raharahan'ny lanitra nandritra ny taona maro. Ao amin'ny bokiny Heaven, dia mandinika tsara ny teny nalaina avy amin'ny Baiboly mifandraika amin'ny fiainana any ankoatra izy. Ny valiny dia sary manaitra ny mety ho fiainana aorian'ny fahafatesana. Manoratra momba izany izy:
“Reraka ny tenantsika isika, reraka ny hafa, ny ota, ny mijaly, ny heloka bevava ary ny fahafatesana. Na izany aza, tia ny fiainana an-tany isika, sa tsy izany? Tiako ny halehiben'ny lanitra amin'ny alina. Tiako ny hipetraka milamina eo anilan'i Nancy eo ambony seza eo am-pandriana, bodofotsy miparitaka eo amboninay, ilay alika miraikitra akaiky anay. Ireo zavatra niainana ireo dia tsy manantena ny lanitra fa manome tsirony ny zavatra andrasana ao. Ny tiantsika amin'ity fiainana eto an-tany ity dia ny zavatra izay mahatonga antsika hanana toe-tsaina hiaina amin'ny fiainana izay noforonintsika. Ny tiantsika eto amin'ity tontolo ity dia tsy ny tsara indrindra atolotry ny fiainana ihany, fa fijerena ny fiainana ho avy bebe kokoa ihany koa. Miorina amin'ny fahalalana tsara kokoa ny tontolo iainantsika ary andeha hojerentsika hoe hanao ahoana ny fiainana any an-danitra.
Ara-batana any an-danitra
Ny fanekem-pinoan'ny Apôstôly, ny fijoroana ho vavolombelona miely patrana momba ny finoana manokana an'ny Kristiana, dia miresaka ny "fitsanganan'ny maty" (ara-bakiteny: an'ny nofo). Mety efa naverinao in-jato izany, saingy efa nieritreritra ny dikan'izany ve ianao?
Matetika ny iray mifanerasera amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia vatana "ara-panahy", zavatra malefaka sy tsy misy dikany ary tsy mitovitovy amin'ny fanahy. Tsy mifanaraka amin'ny hevitra ao amin'ny Baiboly anefa izany. Ny Baiboly dia manondro fa hatsangana amin'ny maty ny olona iray amin'ny maty. Na izany aza, ny vatana dia tsy ho ara-nofo raha tsy azontsika ny hevitr'io teny io.
Ny hevitsika momba ny maha nofo (na ny maha-zavatra) dia mifamatotra amin'ireo lafiny efatra ahitantsika ny tena zava-misy. Fa raha misy lafiny maro hafa tokoa, diso ny famaritantsika ny zavatra tsy ampy.
Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia nanana vatana nofo i Jesosy. Afaka nihinana sy nandeha ary nijery tsara toy ny mahazatra. Azonao atao ny mikasika azy. Ary na izany aza dia vitany ny nihoatra an-tsitrapo ny haavon'ny zava-misy antsika amin'ny alàlan'ny fandehanana fotsiny amin'ny rindrina toa an'i Harry Potter eo amin'ny toerany. Izahay dia mandika izany fa tsy tena izy; fa angamba izany dia ara-dalàna tanteraka amin'ny vatana iray izay afaka mahatsapa ny tontolon'ny zava-misy rehetra.
Noho izany dia afaka miandrandra ny fiainana mandrakizay amin’ny maha-I iray azo fantarina antsika isika, izay manana vatana tena izy sady tsy iharan’ny fahafatesana sy ny aretina ary ny fahalovana, ary tsy miankina amin’ny rivotra, ny sakafo, ny rano ary ny fikorianan’ny ra mba hahafahany miaina? Eny, toa izany tokoa. “... tsy mbola nambara izay ho toetsika”, hoy ny Baiboly. “Fantatsika fa rehefa haseho, dia ho tahaka Azy isika; fa ho hitantsika Izy araka ny maha izy azy"(2. Johannes 3,2, Baiboly Zurich).
Alao sary an-tsaina ny fiainana miaraka amin'ny sainao sy ny dikany - mbola mitondra ny toetranao manokana izany ary tsy ho afaka amin'ny zava-drehetra afa-tsy ny zava-dehibe, ary afaka manomana ny laharam-pahamehana ary afaka mikasa, manonofy ary ho mamorona mandrakizay. Alao sary an-tsaina ny mandrakizay mandrakizay izay hihaonanao indray amin'ny namana taloha ary hanana fotoana hahazoana fandresena bebe kokoa. Alao sary an-tsaina ny fifandraisana amin'ny hafa ary koa amin'Andriamanitra tsy misy tahotra, fihenjanana, na fahadisoam-panantenana. Alao sary an-tsaina hoe tsy manao veloma farany amin'ny havan-tiana akory isika.
Tsy voafatotra amin'ny fanompoam-pivavahana tsy misy fiafarana mandrakizay mandrakizay, ny fiainana mandrakizay dia toa fanamafisam-peo, tsy azo lavina amin'ny halehibeny, amin'izay fantatsika eto amin'ity izao tontolo izao ity ho ny tsara indrindra. Mitahiry zavatra betsaka lavitra noho izay eritreretintsika amin'ny alalan'ny saina voafetra ho antsika ny any ankoatra. Indraindray, Andriamanitra dia manome antsika topimaso ny amin'ny endriky ny zava-misy midadasika kokoa. Nilaza tamin’ireo Atenianina mpino finoanoam-poana i Masindahy Paoly fa “tsy lavitra ny olona rehetra Andriamanitra…” (Asan’ny Apostoly 17,24-27). Ny lanitra dia azo antoka fa tsy akaiky amin'ny fomba azo refesina ho antsika. Saingy tsy mety ho “firenena sambatra sy lavitra” fotsiny. Moa ve izy tsy afaka milaza amintsika ny manodidina antsika?
Avelao hilentika mandritra ny fotoana kelikely ny sainao
Rehefa teraka i Jesoa dia nisy anjely niseho tampoka tamin’ireo mpiandry ondry tany an-tsaha (Lio 2,8-14). Toy ny hoe nivoaka avy tao amin’ny fanjakany ho amin’ny tontolo misy antsika izy ireo. Toy izany koa no nitranga tao 2. Bokin’ny Mpanjaka 6:17, tsy tamin’ilay mpanompo natahotra an’i Elisa rehefa nisy legiona anjely niseho taminy tampoka? Taloha kelin’ny nitoraham-bato azy tamin’ny vahoaka tezitra, i Stefana koa dia nanokatra ireo fihetseham-po sy feo izay tsy takatry ny sain’ny olombelona (Asan’ny Apostoly). 7,55-56). Toy izany ve no nisehoan’ny fahitan’ny Apokalypsy tamin’i Jaona?
Nasongadin'i Randy Alcorn fa "toy ny jamba tsy mahita ny tontolo manodidina azy, na dia misy aza izy io, isika koa amin'ny fahotantsika dia tsy afaka mahita ny lanitra. Azo heverina ve fa talohan'ny fahalavoana dia hitan'i Adama sy i Eva mazava tsara izay tsy tazantsika ankehitriny? Mety ho lavitra antsika ihany ve ny fanjakan'ny lanitra? ”(Heaven, p. 178).
Tombantombana mahavariana ireo. Tsy nofinofy anefa izy ireo. Nasehon’ny siansa fa mihoatra lavitra noho izay azontsika tsapain-tanana ny zavaboary amin’izao fotoana izao. Ity fiainan'olombelona mihodidina an-tany ity dia fanehoana faran'izay voafetra ny maha-izy antsika amin'ny farany. Tonga teo amintsika olombelona i Jesosy tamin'ny maha-iray amintsika azy, ary noho izany dia nanaiky ny fetran'ny fisian'ny olombelona hatramin'ny fiafaran'ny fiainan'ny nofo rehetra - ny fahafatesana! Taloha kelin’ny nanomboana azy tamin’ny hazo fijaliana, dia nivavaka toy izao izy: “Ray ô, omeo Ahy indray ankehitriny ny voninahitra nananako teo aminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao!” Ary aoka tsy hohadinointsika fa nanohy ny vavaka nataony izy hoe: “Ray ô, efa nomenao [ny olona] izany. amiko, ary tiako izy ireo hiaraka amiko amin’izay misy ahy. Izy no hahita ny voninahitro izay nomenao Ahy, satria efa tia Ahy Hianao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao.”7,5 ary 24, Baiboly Vaovao Tsara).
Ny fahavalo farany
Ny iray amin'ireo fampanantenan'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia ny hoe "ny fahafatesana dia resy mandrakizay". Any amin'ny tany mandroso, nahomby tamin'ny famaritana ny fomba hiainantsika maharitra folo na roa taona. (Mampalahelo anefa fa tsy nahomby izahay tamin'ny fikarohana ny fomba fampiasana io fotoana fanampiny io). Fa na dia azo atao aza ny mandositra ela kokoa ny fasana dia ny fahavalontsika ihany no fahavalontsika tsy azo ihodivirana.
Araka ny nomarihin’i Alcorn tao amin’ny fianarany nahavariana momba ny lanitra: “Tsy tokony hankalaza ny fahafatesana isika, na i Jesosy. Nitomany ny fahafatesana Izy (Jao 11,35). Tahaka ny misy tantara mahafinaritra momba ny olona izay nandeha am-pilaminana ho any amin'ny mandrakizay, dia misy ihany koa ireo izay afaka miresaka momba ny olona mihamalemy ara-tsaina sy ara-batana, misavoritaka, kivy, izay ny fahafatesany indray dia mamela ny olona reraka, tohina, alahelo. Mangirifiry sy fahavalo ny fahafatesana, fa ho an’izay miaina amin’ny fahalalana an’i Jesosy, dia izany no fanaintainana faratampony sy fahavalo farany” (p. 451).
Andraso! Mitohy hatrany izany. , ,
Afaka nanazava bebe kokoa tamin'ny lafiny maro hafa isika. Raha hita fa voatazona ny fandanjana ary tsy miala amin'ny lohahevitra isika, ny fikarohana ny zavatra antenaina aorian'ny fahafatesany dia sehatra fikarohana mahaliana. Nefa ny teny isa amin'ny solosainako dia mampatsiahy ahy fa ao anatin'ny fetran'ny fotoana sy ity fotoana ity ity lahatsoratra ity toerana no foto-kevitra. Andao hofaranantsika amin'ny teny farany feno fifaliana avy amin'i Randy Alcorn: "Miaraka amin'ny Tompo tiantsika sy ireo namana malalantsika isika, dia ho lasa farany miaraka isika ao amin'ny tontolo vaovao mahafinaritra hotadiavina sy hararaotina. Jesosy no ho eo afovoany, ary ny rivotra iainantsika dia feno fifaliana. Ary rehefa mieritreritra isika avy eo fa tsy mety hisy fitomboana bebe kokoa, dia ho hitantsika - hisy izany! ”(P. 457).
nataon'i John Halford